सुन्दर कभर भएका पुस्तकहरू | अनलाइन क्रिएटिभहरू
राम्रो कभर संग किताबहरु
एनकर्नी आर्कोया | 31/03/2022 23:03 | अद्यावधिक गरियो 31/03/2022 23:47 | प्रेरणा
पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व मध्ये एक यसको आवरण हो।। यसको साथ, सम्भावित पाठकहरू फन्दामा छन्। र यो हो कि, यदि यो आँखा मार्फत प्रवेश गर्छ भने, तपाईंसँग उसलाई पुस्तक उठाउने, सारांश पढ्न र पढ्नमा रुचि राख्ने थप अवसरहरू छन्। त्यसकारण, यदि तपाइँ ग्राफिक डिजाइनर वा लेखक हुनुहुन्छ र तपाइँ आफ्नो पुस्तक राम्रोसँग बेच्न चाहनुहुन्छ भने, आवरण मुख्य कुरा हो। र सुन्दर कभर भएका पुस्तकहरू धेरै छन्।
वास्तवमा, तल हामी तपाइँलाई ती मध्ये केहि देखाउन जाँदैछौं, दुबै आधुनिक र पुरानो। यो एक तरिका हो कि तपाईं प्रेरित हुन सक्नुहुन्छ र तपाईंले के हेर्नु पर्छ भनेर जान्न सक्नुहुन्छ यी संग हासिल भएको समान प्रभाव प्राप्त गर्न। के तपाइँ केहि हेर्न चाहनुहुन्छ?
हामीलाई थाहा छ कि अभ्यास उत्तम छ, हामी तपाईंलाई धेरै लामो समय पर्खन बाध्य पार्दैनौं र यहाँ हामीले गुगल मार्फत फेला परेका सुन्दर कभरहरू सहितका पुस्तकहरू प्रस्तुत गर्दछौं। यदि तपाइँसँग तपाइँलाई कल गरेको छ भने, तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँ टिप्पणीहरूमा हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जानुहोस्!
1 सुन्दर कभर भएका पुस्तकहरू: डा. जेकिल र मिस्टर हाइडको अनौठो केस
2 विस्मृति को संक्षिप्त विवरण
3 एक घडीको सुन्तला
4 वन गेट
6 राष्ट्रिय सफलता
8 किन कभरहरू महत्त्वपूर्ण छन्
8.1 कभर हुनु पर्ने सबै कुरा
सुन्दर कभर भएका पुस्तकहरू: डा. जेकिल र मिस्टर हाइडको अनौठो केस
विशेष रूपमा, हामी रेड फक्सको सम्पादकीय पुस्तकहरूको संस्करणलाई सन्दर्भ गर्दैछौं। यो २०२० को उत्कृष्ट कभरहरू मध्ये एक हो र सत्य यो हो यदि तपाईंले नजिकबाट हेर्नुभयो भने, क्यारेक्टरहरूको सिल्हूटहरू सिर्जना गर्ने छायाँहरू राम्ररी परिभाषित छन् र तिनीहरूले तपाईंले यसमा के फेला पार्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ दिन्छ।
विस्मृति को संक्षिप्त विवरण
यो पुस्तक पनि २०२० मा बाहिर आयो र सिरुएलाको हो। यदि तपाइँ कभर हेर्नुहुन्छ भने, यो सबटाइटल भन्दा थोरै ठूलो शीर्षकको साथ एकदम सेतो छ, सबै क्यापहरूमा। लेखकको हकमा पनि त्यस्तै हुन्छ। तर, ती मध्ये केही जिज्ञासु आकारहरू छन्।
सुरुमा यो सम्भव छ त्यो शब्दलाई के राख्दैछ, त्यो विस्मृति हो थाहा छैन। र यो हो कि, पुस्तक अनुसार, समयले हामीलाई सम्झनाहरू गुमाउँछ, कि हामी सबै कुरा 100% सम्झन सक्दैनौं। र त्यो कभरमा गरिएको छ।
एक घडीको सुन्तला
यो तपाईंले फेला पार्न सक्ने सुन्दर कभरहरू भएका पुस्तकहरू मध्ये एक हो। र यो सबै छ। बुकलेट पब्लिशिङ हाउसबाट, यसले हामीलाई सुन्तला रंगको पृष्ठभूमिमा माथिको लेखकको नाम र तल, ठुलो र छायासहितको पुस्तक प्रस्तुत गर्दछ, साथै एक जिज्ञासु फन्ट, शीर्षक।
तर सबैभन्दा अचम्मलाग्दो कुरा के छ सुन्तला रंगको पृष्ठभूमि त्रिभुजसँग भाँचिएको छ जसमा केही विशेषता भएको व्यक्तिको रेखाचित्र देखिन्छ: बलर टोपी र जिज्ञासु पलकहरू।
हामीले यो उपन्यास आरबीए मोलिनो पब्लिशिङ हाउसबाट रोजेका छौं किनभने कभर आफैंले धेरै भन्छ। वास्तवमा, जब तपाइँ यसलाई हेर्नुहुन्छ तपाइँ नयाँ चीजहरू, वा फरक दृष्टिकोणहरू फेला पार्नुहुनेछ। यसमा तपाईसँग केही ढोकाहरू छन् र तिनीहरूबाट सीढीहरू जस्तै बाहिर निस्कन्छन्, रूखहरू अंक आठ बनाउँछन्। तर यसको वरिपरि त्यहाँ धेरै तत्वहरू छन् जुन हामीलाई कुनै शंका छैन कि कथासँग सम्बन्धित हुनेछ।
अनाग्राम प्रकाशन गृहबाट। यी पुस्तकहरू प्रायः सबैको साझा आवरण छ, पहेंलो पृष्ठभूमि र केन्द्रमा एक वर्ग छ जुन प्रत्येक पुस्तकको लागि डिजाइन गरिएको हो। यस अवस्थामा, तिनीहरूले इट्टा पर्खाल राख्न रोजे। यो साँच्चै कथा संग जान्छ।
तर तिनीहरूले थपे केहि ईंटहरूमा वाक्यांशहरू जुन पाठकले के फेला पार्न गइरहेको छ भन्ने संकेत हो। हामी भन्न सक्छौं कि तिनीहरू हुक वाक्यांशहरू हुन्; एउटा प्रयोग गर्नुको सट्टा धेरै राखेका छन्।
र तिनीहरूसँग तिनीहरू त्यो पाठकलाई समात्न खोज्छन्।
Glénat पब्लिशिङ हाउसबाट जेएम पोन्सको यो काम, एक आवरण हो जुन पार हुन्छ। र यो त्यो हो, जब तपाइँ यसलाई पहिलो पटक देख्नुहुन्छ, तपाइँ पहाडमा राखिएको ओसबोर्न साँढे वा यस्तै केहि सोच्नुहुन्छ।
निस्सन्देह, जब तपाइँ अलि नजिक हेर्नुहुन्छ, तपाइँ माउन्टको त्यो जिज्ञासु आकार महसुस गर्नुहुन्छ, जुन महिला बट जस्तो देखिन्छ। र त्यो हो शीर्षक भन्दा पहिले छविलाई प्राथमिकता दिन्छ, जुन बेवास्ता हुन सक्छ, तर कभर कल भएकोमा कुनै शंका छैन। ध्यान राख्नुहोस् कि नग्नतासँग सम्बन्धित लगभग सबै कुरा गर्छ।
हामी फ्रान्ज काफ्काको एलियान्जा सम्पादकीय पुस्तक ला मेटामोर्फोसिसको साथ समाप्त गर्न जाँदैछौं। यो तपाइँको लागि एउटा उदाहरण हो कि कभर सधैं छवि संग जानु हुँदैन। कहिलेकाहीँ शब्दहरू नै पर्याप्त हुन्छन्।
यस अवस्थामा हेर्नुहोस् मेटामोर्फोसिस शब्द धेरै पटक, तर यदि तपाईं नजिकबाट हेर्नुभयो भने, त्यहाँ छाया छ जुन, प्रत्येक शब्द संग, ठूलो बढ्छ। कुरो के हो? ठिक छ, तपाइँ एक क्यारेक्टरको साथ सुरु गर्नुहुनेछ र तपाइँ विकास देख्नुहुनेछ र यो कसरी परिवर्तन हुन्छ।
वास्तवमा, एउटा जिज्ञासा यो हो कि, जब तपाईंले आवरण हेर्नुभयो, तपाईंले पक्कै पनि सोच्नुहुनेछ कि पुस्तकलाई मेटामोर्फोसिस भनिन्छ न कि मेटामोर्फोसिस। र यो त्यो दोस्रो शब्दलाई प्राथमिकता दिइन्छ र यो हाम्रो स्मृतिमा राखिएको छ।
किन कभरहरू महत्त्वपूर्ण छन्
una आवरण व्यक्तिको पहिलो छाप जस्तै हो। जब तपाई उसलाई देख्नुहुन्छ, केवल उसलाई हेरेर, तपाईलाई चासो छ कि छैन थाहा छ। तपाई त्यता आकर्षित हुनुभएको होस् या नहोस् । र यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि बेच्ने थप अवसरहरू छन्।
तर थप रूपमा, आवरणहरू पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्णको सारांश हो। उपचार गर्नुपर्ने विषय बोरिङ हुँदा किताबमा सुन्दर आवरण राख्नु बेकार हो। वा यो उनको संग कुनै सम्बन्ध छैन। यसले प्राप्त गरेको एक मात्र चीज हो कि पाठकले ठगिएको महसुस गर्छ, र राम्रो विचारको सट्टा, तपाईले खराबलाई जोखिममा राख्नुहुन्छ।
कभर हुनु पर्ने सबै कुरा
यदि तपाइँ एक सुन्दर आवरण बनाउन चाहानुहुन्छ जुन उत्तम छ, त्यहाँ धेरै तत्वहरू छन् जुन तपाइँ बिर्सन सक्नुहुन्न। यी हुन्:
लेखकको नाम। त्यो हो, त्यो पुस्तक लेख्ने व्यक्ति। यो वास्तविक नाम वा छद्म नाम हुन सक्छ।
पुस्तकको शीर्षक। यस अवस्थामा यो लेखक भन्दा महत्त्वपूर्ण वा बढी महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा, शीर्षक सधैं लेखकको भन्दा ठूलो हुनेछ। केही अवसरहरूमा मात्र यो उल्टो तरिकाले देखिएको छ (सामान्यतया किनभने यो लेखकको नाम हो जुन उसले लेखेको कथालाई बेवास्ता गर्दै बेचिन्छ)।
सम्पादकीय। यदि उहाँसँग छ भने। आत्म-प्रकाशन हातमा यति नजिक छ र प्रकाशन गरेर भन्दा नि: शुल्क कमाउने सम्भावनाको साथ, मैले धेरै चोटि आफैलाई सुरु गरें।
कहिलेकाहीँ त्यहाँ शीर्षक र उपशीर्षक हुनेछ। वा हुक वाक्यांश। यी जहिले पनि सानो फन्ट साइजमा जान्छन् किनभने तिनीहरू धेरै बाहिर खडा हुन चाहँदैनन्, यद्यपि तिनीहरूले ध्यान आकर्षित गर्छन्।
हामी तपाईलाई घण्टाको लागि उदाहरणहरू दिन सक्छौं किनभने सत्य यो हो कि त्यहाँ सुन्दर आवरणहरू भएका धेरै पुस्तकहरू छन्। तर अब हामी तपाईंलाई पुस्तकहरू सिफारिस गर्न छोड्छौं जसको कभर तपाईंले मन पराउनुभयो वा तपाईंको परियोजनाहरू पूरा गर्न प्रेरित गर्नुभयो। तपाईं हामीलाई टिप्पणी गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » राम्रो कभर संग किताबहरु
रचनात्मक विज्ञापन प्राप्त गर्न के आवश्यक छ